Izigaba kuwo wonke ama-eReaders
I-Todo eReaders iyibhulogi labadla izincwadi abathi, ngaphezu kwephepha, nabo bafune ukuwafunda kumadivayisi kagesi. Imininingwane ozoyithola kule bhulogi isukela ezincwadini kuya kumadivayisi ozoyifunda, ngesoftware ezokuvumela ukuthi uguqule umbhalo ube yifomethi ehambisanayo ye-eReader yakho.
Kuwo wonke ama-eReaders siphinde sikhulume ngabakhiqizi abahamba phambili balolu hlobo lwedivayisi, oluzokusiza ukuthi unqume ukuthi iyiphi efanele izidingo zakho. Ngakolunye uhlangothi, uzothola imininingwane ehlobene nezinye izinhlobo zehadiwe, njengezesekeli, amaphilisi noma ukuguqulwa ongakwenza ku-eReader osuvele unayo.
Kepha le bhulogi ibingeke iphelele ngaphandle kwezindaba zamanje, lapho uzothola nokukhishwa, izindaba mayelana nababhali nemibhalo iyonke. Unazo zonke izigaba ezitholakalayo ngezansi. Okwethu ithimba lokuhlela Okukhethekile kunesibopho sokuzigcina zibuyekezwa ukuze uhlale usesikhathini.